रासस मंगलबार, जेठ २०, २०७७, ०८:०५
दुल्लु- दैलेखको दुल्लु नगरपालिकाले फौजी किरा नियन्त्रणका लागि युवा परिचालन गरेको छ। बारीमा लगाइएको मकै फौजी किराले नष्ट गर्न थालेपछि नगरपालिकाले कृषि शाखामार्फत युवा परिचालन गरेको हो।
आइतबारदेखि १३ वटै वडाका ६५ युवालाई कृषि सामग्री र विषादी दिएर परिचालन गरिएको नगरपालिकाको कृषि शाखाले जनाएको छ। प्रत्येक वडाका कृषि विषय पढेका पाँच युवालाई दैनिक रु ६०० पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने गरी फौजी किरा नियन्त्रणमा खटाइएको शाखाका प्रमुख राजन विष्टले जानकारी दिए। 'किरा नियन्त्रण गर्नका लागि ‘इमामेक्टिन बेञ्जाइट र इमाक्लोरप्रिङ स्टिकर’ र ‘न्यापस्याक टर्की’ लगायतका विषादी प्रयोग गरेका छौं', उनले भने।
नगरपालिकाले सबै वडामा रोगसँग भोकको प्रकोप फैलिने सम्भावनाको नियन्त्रणका लागि अभियान सञ्चालन गरेको उनको भनाइ छ।
एकातर्फ युवालाई हौसला पनि हुने र कृषकको घरदैलोमा पनि प्रत्यक्ष सेवा पुग्ने भएकाले निर्णय गरेर नै यो अभियान अघि सारिएको नगरपालिकाले बताएको छ। यसमा गत वर्ष खर्च हुन नसकिरहेको रकम खर्च गरिने छ।
सबैजसो क्षेत्रमा मकै उत्पादन राम्रो हुने भए पनि फौजी किराले गत वर्षदेखि ८० प्रतिशत जति क्षति पुर्याउँदै आएको नगरपालिका प्रमुख घनश्याम भण्डारीले बताए। विगत दुई–तीन वर्षदेखि यो किराको आक्रमणले उत्पादनमा ह्रास आइरहेको उनले बताए। 'यो वर्ष खाद्य सङ्कट आउने सम्भावना देखिन्छ, त्यही भएर हामीले समयमै यो अभियान थालेका हौं', उनले भने।
यस्तो अभियान स्थानीय तहका रूपमा नगरपालिकाले प्रदेशमै पहिलोपटक थालेको हो।
सन् २०२२ मा विकासशील राष्ट्रको सूचीमा जाने लक्ष्यको निकटमा छौं ः अर्थमन्त्री डा खतिवडा
अर्घाखाँची : सलहबाट मकै बालीमा पाँच करोडकाे क्षति
चीनमा देखिएको स्वाइन फ्लू फैलने जोखिम कति? चीनमा अहिले नयाँ किसिमको एच१एन१ स्वाइन फ्लू भाइरसको संक्रमण फैलिरहेको छ। एक नयाँ अध्ययनका अनुसार सुँगुर फार्ममा कार्यरत विभिन्न कर्म... शनिबार, असार २०, २०७७
शनिबार कुन जिल्लामा कति भेटिए कोरोना संक्रमित? गत २० घण्टामा गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल राजविराजमा सप्तरीका ३६ र सिरहाका १५ जनामा कोरोना भेटिएको छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगश... शनिबार, असार २०, २०७७